Afrika atsimo: Fiadiana ny amboara manerantany, zato andro sisa · Global Voices teny Malagasy
Afrika atsimo: Fiadiana ny amboara manerantany, zato andro sisa
Voadika ny 03 Marsa 2010 13:28 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Deutsch, Português, বাংলা, Español, English
Tompokolahy sy tompokovavy, indreto isika ireto! Manomboka ny fanisana ary miampita amin'ny isa azo marihina isika, 100 andro tokoa manko sisa. Ny fiadiana ny ho tompon'ny amboara manerantany amin'ny lalao baolina fandaka karakarain'ny FIFA tokoa manko izao hetsika ara-panatanjahantena be mpiandry indrindra tsy noho ny fiezineziny ihany fa io fa any amin'ny kaontinanta maroloko indrindra manerantany no hanatontosana azy – Afrika!
Raha mbola misalasala amin'izay hahavitan'i Afrika Atsimo ity fifaninanana ity ny haino aman-jery tandrefana ka manabanty matetika ny kaontinanta, dia miomana hanapariaka araka izay tratra ny andron'ny 2 Marsa andro fahazato indrindra mialoha ny hetsika goavana.
Inona ny tokony ataon'i Afrika Atsimo handresy lahatra izao tontolo izao fa efa vonona tanteraka izy ?:
Manontany ny tenako aho hoe inona koa no tokony ataon'i Afrika Atsimo handresy lahatra izao tontolo izao fa tsy vitan'ny hoe vonona izy, fa mahavita mampiantrano, ary ho tsara fampiantranoana ny Amboara Manerantany?
Tsy misy ifandraisany amin'ny fahavononan'ny ekipa isan-karazany kosa aloha ny fanisana, izay manentana antsika kokoa hiatrika ity lalaom-panatanjahantena miavaka manerantany ity. Ary amin'izany fahendrena izany dia mahazo matoky ny Afrikana Tsatsimo fa hahazo ny vatoko. Tsy nikely soroka tokoa ny Afrikana Tatsimo nikarakara ity Amboara Manerantany ity hahatonga ny fahatsiarovana ny fifaninanana hisy akony mahavalalanina hatrany na dia efa vita ela (na iray volana aoriana) aza ny lalao.
Ataon'i The BlaBla Blog ho vinavina (mora tanterahina kokoa) ny ifantohana ‘hanofahofa ny saina ho amin'ny hetsika Afrika Atsimo 2010 ho mariky ny fankalazana ity fotoan-dehibe ity,
2 Marsa tokoa manko no andro hiantsoana ny Afrikana Tatsimo, eto sy any ivelany, haneho ny haravoan'izy ireo hiatrika ny fifaninanana sy handrangaranga ny fitiavan'izy ireo ny fireneny sy ny lalao mahafinaritra
Ao amin'ny fanadihadiana mahaliana iray avy amin'ny bolongan'ny aro lozan'ny fifamoivoizana Afrikana Tatsimo no ipoiran'ny antontan'isa milaza fa matoky ny fahavononan'ny fireneny hampiantrano ny lalao ny 85 %n'ny Afrikana Tatsimo:
Taha avo dia avon'ny Afrikana Tatsimo (85%) manohana ny fikarakarakana ny fiadiana ny Amboara Manerantany nipoitra avy tamin'ny valim-panadihadiana – enti-mandrefy ny fahavononana hiatrika ny Amboara Manerantany any amin'ny tanàna lehibe maro manerana an'i Afrika Atsimo
Tsapan'ny Afrikana Tatsimo tsara anefa fa mbola maro ny asa tokony hatao ary ny 61%n'izy ireo dia manaiky fa mbola hifantoka bebe kokoa eo amin'ny fitandroana ny filaminana ry zareo raha tiana tsiaro tsara amin'ny fireneny ny mpitsidika
Be vazivazy kokoa ny SouthAfrica WorldCupBlog amin'ny lahatsoratra manao hoe – Here come the fat cats of FIFA (Tonga sy saka matavin'nyFIFA)…:
Niaraka tamin'ny olo-manan-kaja maro hafa tao Durban hanatrika ny 100-andro sisa ny filohan'ny FIFA Sepp Blatter. Hanome voninahitra ny fotoana miaraka amin'ny filoha lefitra (ny firenena) Kgalema Motlanthe ny Tale jeneralin'ny komity fikarakarana ao an-toerana Danny Jordaan. Maro kosa ny olo-malaza handray anjara amin'izany ka anisany ry Jay Jay Okocha, Roger Milla, Mark Fish ary ry Hossam Hassan.
Nasongadiny ihany koa izay mbola mampihaotraotra ny mpikarakara indrindra fa ny eo amin'ny resaka foto-drafitrasa ka tondroina manokana ny kianja filalaovana:
Ny mampiketriketrika ny loha farany dia ny hatsaran'ny kianja filalaovana vonona na any amin'ny kianja hihaonana izany na any amin'ny kianja nosafidian'ny ekipa mandray anjara hanazarany tena.”… Namotaka loatra ny kianja ka nahatonga ny federasiona Anglisy hanao fifanarahana amin'ny Richard Hayden, avy amin'ny ivotoeram-pikarohana hampivoarana ny fanatanjahantena hanatsara ny momba (ireo kianja) ireo. Nahafa-po aoka izany ny asa nataon-dranamana ka nahatonga ny FIFA hifanao sonia aminy hikarakara ny kianja misy olana rehetra manodidina ny toby fanazarantena rehetra.
Araka ny nambaran'ny Soccerway.com, dia mbola misarisary zoro hahazo mpanohana hatrany i Afrika Atsimo amin'izao 100 andro sisa izao:
Nandrisika ny mpiray tanindrazana tao an-toerana ny filoha Jacob Zuma nandritra ny kabarim-pilazalazana hividy tapakila maromaro kokoa sy hanohana ny lalao ho fanomezam-boninahitra ny filoha teo aloha Nelson Mandela, izay niezaka tokoa hahatonga ny Amboara Manerantany holalaovina eto. Nanana ny anjara toerana fototra tokoa manko Atoa Mandela hahazoan'ny firenena hampiantrano ity hetsika goavana ity. Adidintsika ihany koa ny mampahomby ny Amboara Manerantany hanomezam-boninahitra azy,” Hoy Atoa Zuma. “Efa vonona ny fotodrafitrasa, ny fiarovana ary ny fitaovana hampahomby ny fiadiana ny amboara.
“Hanolotra fiadiana ny Amboara Erantany katraka isika,” hoy ny bolongana The Times Online:
Hita soritra ho hendratrendratra tokoa ny manerana ny firenena ary hanaporofo ny fahaiza-manaon'ny Afrikana eo imasoon'izao tontolo izao i Afrika Atsimo. Firenena miatrika fanamby ara-tsosialy goavana ny firenentsika, saingy hanolotra fiadiana ny Amboara Erantany katraka isika
Farany ny bolongana BushRadio mamelabelatra ny fandaharam-potoana hanamarihana ny fotoana:
Ho avy hanatrika ny lanonana iarahana amin'ny Besinimaro any an-tanànan'i Durban, hianohana mialoha ny tsiron'ny loko sy ny herin'ny fiadiana ny Amboara Manerantany FIFA 2010, ny Filoha lefitra ,”
Ho fanamarihana ny fotoana dia hifandona amin'ny Namibia ny Bafana Bafana ny takarivan'ny alarobia, hanomboka amin'ny valo ora sy sasany alina ny lalao. Nety aloha ny lalaom-pirahalahiana nataony raha nandresy 6-2 sy 3-0 an'i Swaziland sy Zimbabwe ny ekipa.